संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न नदिएको आरोप लागेपछि कांग्रेसले भन्यो, ‘हामी नयाँ नक्सा र संशाेधनको पक्षमा छौं’ - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न नदिएको आरोप लागेपछि कांग्रेसले भन्यो, ‘हामी नयाँ नक्सा र संशाेधनको पक्षमा छौं’
काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले नयाँ नक्साका विषयमा भारतले गम्भीर षड्यन्त्र गरेको खुलासा गरेका छन । भारतबाट आएका एक पूर्वराजदुतले नयाँ नक्सा नेपालको संविधानमा समावेश गराउनका लागि नेताहरुको घरघर पुगेर दवाव दिन थालेको थापाको भनाई छ ।
यसै विषयलाई लिएर थापाले काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेका छन । नक्सा सम्वन्धी विषयमा अनेक चलखेलहरु भइरहेको र नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने प्रक्रिया विचैमा तुहिनसक्ने आशंका बढीरहेका बेला नेता थापाले बैठकका लागि ढिला नगर्न आग्रह गरेका हुन ।
बुधबार ट्वीट गर्दै थापाले उक्त्त कुरा बताएका हुन् ।
यस्तो छ फण्डा
बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश भएन । नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७ सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूचि मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो।
तर, बुधबार उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइयो र बैठक राखियो । एकाएक स्थगन हुनु र पुर्व भारतीय राजदुत श्याम शरण काठमाडौँको मेरियट होटलमा आउनुले कतै संविधान संसाेधन नहुने त हैन भनेर आम मानिसमा डर पैदा भएकाे छ । भारत र नेपाल दुवैतिर अहिले लकडाउन छ । भारतले जेठ १८ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ । नेपालले जेठ २० गतेसम्म लकडाउन थपेको छ । दुई देशका सीमा बन्द गरिएको छ । भारतबाट आउने नेपालीबाहेक अन्य गाडी सीमा रोकिएका छन् । खाद्यान्न, औषधिलगायतका सामग्री भारतबाट आउन रोक लागेको छैन ।
आजको बैठकमा संविधान संशोधन नभएपछि भारतीय मिडियाले कांग्रेसले संशोधन गर्न नदिएको आरोप लगाएको थियो तर नेपाली कांग्रेसका प्रबक्त्ता विश्वप्रकाश शर्माले उक्त्त कुराको खण्डन गरेका छन् ।
भारतीय मिडिया लेख्छ : नक्सा विवादबाट नेपाल पछि हटेको भारतीय मिडियाको दाबी
ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रस्ताव ल्याउंदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र ? प्रक्रिया सुचारु गर्नोस् l के.स.को बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र शंसोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दि´सकेका छौं l यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं / रहन्छौं
प्रस्ताव ल्याउंदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र ?@PM_Nepal प्रक्रिया सुचारु गर्नोस् l के.स.को बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र शंसोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दि´सकेका छौं l यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं / रहन्छौं l
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) May 27, 2020
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई थापा र शर्माले बैठक बोलाउन ढिला गर्न नहुने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन । उनले परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षलाई औपचारिकता दिनका लागि मात्रै बैठक बोलाउन लागिएकाले ढिला नगरी भोली नै बैठक बोलाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
याे विषयमा ट्वीटरमा पनि बहस नै चलेकाे छ । हेराैं केहि ट्वीटहरु
संसदको ‘कार्यसूची’ बनाउन/संशोधन गर्न नेकपा बाहेक दास्रो दलले सक्दैन । अब कसको कारणले संविधान संशोधन हुन सकेन आफै निर्णय लिनुस् । वा प्रायोजित समाचारहरुको पछि लागेर कांग्रेसलाई गाली गर्नुस् !!
— स्वारी ;)) (@ptkums) May 27, 2020
२०५२ सालमा माओवादी विद्रोह शुरु भएपछी सबैभन्दा “भारतबिरोधी” र राष्ट्रबादी माओवादी र सबैभन्दा भारतपरस्त काँग्रेस भन्ने तर्क खुब सुनिन्थ्यो। त्यही कथा फरक स्वरुपमा दोहोरिने संकेत देखिएको हो?
— Siromani Dhungana (@siromanid) May 27, 2020
कांग्रेसको दोहोरो रणनीति:
नयाँ नक्साको बारेमा संविधान संशोधनको बारेमा पार्टी भित्र छलफल गर्नुछ भनेर नेपालको सरकारलाई अल्मल्याउने ।
भारतीय मिडिया मार्फत कांग्रेस नयाँ नक्साको विपक्षमा छ भनेर प्रचारप्रसार गराउने ।
यो कस्तो कांग्रेस हो ?
— मनिष -सिमरा (@hellosimara) May 27, 2020
अझै पनि भारतले सत्ता दिलाइदिन्छ भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सोच हो भने त्योभन्दा नालायक र गए-गुज्रेको सोच अर्को हुन सक्दैन। शेरबहादुर सरलाई प्रमको कुर्ची नौलो होइन। नौलो त अब त आफ्नो उठेको शीर हो, झुक्न नदिए हुन्छ।
कस्ले सुनाइदेला यति कुरो?
— Narayan Amrit (@amritna) May 27, 2020
नक्सावाद : पुच्छर छिर्‍यो, हात्ती अड्क्यो होला कि भन्ने भय भयो। भारतीय मिडिया भन्छन्, नक्सा कुट्नितीमा नेपाल पछि हट्यो। यता मन्त्रीज्यूले घरघरमा नक्सा पुर्‍याउनुभो। संसदको कार्यसूचिमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने कार्यक्रम अटाएन। इतिहासमा सुवर्ण अक्षरले लेख्ने काममा किन ढिलाइ?
— Rupesh Shrestha (@Roopess) May 27, 2020
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, जेठ १४ २०७७ १८:२८:२७